राम्रो जीवन के हो? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
जस्तै "मुद्रा एक कुरा हो म मनपर्ने गीतहरू थियो,रिच प्राप्त गर्नुहोस् वा प्रयास गर्दै मरो। "यो साँच्चै राम्रो जीवनको विचार वालेट भएको थियो भन्ने होइन अचम्मको छ त्यसैले" र म जस्तै शीर्षक एल्बम सुनेर थियो "यति भरी यो पनि नजिक हुन्छ कि. यो पैसा बारेमा सबै थिएन, हुनत. म hedonism बारेमा, आकस्मिक सेक्स, भौतिकवाद, irresponsibility, आलस्य, लागूपदार्थको, सबै असल जीवन छ भन्ने पहेली गर्न टुक्रा रूपमा - र प्राप्त आदर.
र म यो राम्रो जीवनको पायो चित्र संग मुख्य समस्या यो मलाई वरिपरि केन्द्रित थियो. यो मेरो बारेमा सबै थियो. म पैसा कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? म कसरी आदर प्राप्त गर्न सक्छन्? म स्थिति कसरी प्राप्त गर्न सक्छन्? म कसरी संसारको चलाउन सक्नुहुन्छ? म के सुनिरहेको थियो र खाने झूट को एक गुच्छा थियो. र जवानहरूले जब रेडियो मा बारी, त्यहाँ धेरै हिप-हप छ हुनत राम्रो सुनिन्छ, त्यसैले यो धेरै राम्रो जीवन साँच्चै के झूट भरिएको छ.
हुनत मलाई गलत प्राप्त छैन. हिप-हप संगीत समस्या थिएन. ती पापी झूट थिए. यो मेरो संस्कृति र वास्तविकता किनभने म हिप-हप मा जूम कारण छ. म घृणा गर्नुभएको सक्छ हिप-हप, तर म अझै पनि अरू कोही ती सही नै झूट खुवाउनु गरिएको थियो. र मेरो आत्म-केन्द्रित, महिमा-भोक हृदय तिनीहरूका खाए.
तर जब म भेट येशूले सबै परिवर्तन. म संसारको एउटा नयाँ तस्वीर र जीवनको नयाँ तस्विर सामना थियो. र त म कसरी पूर्ण जीवन बाँच्न बाहिर आंकडा नयाँ खोज मा थियो. म अब झूट को प्रकाश मा जीवन बिताउन चाहेनन्. म सत्य चाहन्थे.
हामी विश्वास गर्न जारी भने हामी बाँच्न कसरी गर्नुपर्छ बारेमा निहित, नतिजा प्रमुख हो. हामी केही अन्य विकल्प जीवित गरिने छैन; हामी गर्न बनाइयो बाटो छैन जीवित हुनेछ. हामी कुरा छैन कि सामान पछि chasing हाम्रो जीवन बर्बाद छौँ. हामी ठूलो तस्वीर सम्झना छौँ. हामी साँचो आनन्द र सन्तुष्टि अनुभव छैन. हामी बाँच्न सिर्जना जस्तै हामी बाँच्न छैन. हामी राम्रो जीवन बाँच्न हुनेछ.
पक्कै धर्मशास्त्र शब्द कहिल्यै प्रयोग "असल जीवन।" तर हामी भन्न गर्दा "असल जीवन" हामी सामान्यतया हामी बाँच्न सक्छ जीवन को सबै भन्दा राम्रो तरिका अर्थ. त्यसैले म मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ जीवन को सबै भन्दा राम्रो तरिका biblically छ के. म हामी बाँच्न सिर्जना बाटो बाँच्न चाहन्छौं. त्यसैले म असल जीवन छ तीन कुराहरू हेर्न चाहनुहुन्छ.
म. असल जीवन राम्रो परमेश्वरको विश्वास गरेर बाँचिरहेका छ
भन्ने पुस्तकमा म कसरी असल जीवन परिभाषित. राम्रो परमेश्वरको विश्वास द्वारा जीवित. र मलाई तिमी किन बताउन गरौं.
हामी सबै विश्वास प्रत्यक्ष
या नगर्ने हामी यो वा महसुस, हामी सबै विश्वास को मान्छे हो. हरेक मानव. मसीहीहरूले, मुस्लिम, हिन्दूहरू, Buddhists, Agnostics, Atheists - विश्वास द्वारा प्रत्यक्ष हामी सबै, हामी कुनै पनि क्षण विश्वास के हामी प्रकाश बस्ने. खेलाडीहरूलाई छन् जसले तपाईंलाई ती साँच्चै कडा अभ्यास. किन? तपाईं यसलाई तपाईं आफ्नो खेल मा राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास किनभने (तिमी मलाई बास्केटबल खेल्दै हुर्किने थिए नभएसम्म र अझै पनि साँच्चै खराब हुनुको). वा कसरी यो. तपाईं केही आज यहाँ प्राप्त गर्न Google नक्सामा ठेगाना राखे. किन? किनभने तपाईं विश्वास आफ्नो फोन तपाईं सही निर्देशन दिन भनेर. तपाईं विश्वास भने आफ्नो फोन धोखा हुनेछ, जो मलाई लाग्छ मेरो कहिलेकाहीं गर्छ, तपाईं यसलाई प्रयोग थियो. म मा र जान सक्छ. तर हामी सबै विश्वास द्वारा बाँच्न.
म पुस्तकमा यो कुरा. म साँच्चै निर्देशन संग खराब छु. मेरी पत्नी लगातार म निर्देशन छु कसरी लाटा छक्क छ. म गए र एक driveway मा झिकेर एक समय वरिपरि बारी, तर त्यसपछि म एउटै बाटो फिर्ता भयो. साँच्चै खराब. यो मलाई नेतृत्व गर्न भरोसा गर्न धेरै लाटा हुनेछ. त्यसै गरी, हामी सबै खसेको छन्. हाम्रो मन हामीलाई गलत दिशामा नेतृत्व. शैतानको हामीलाई झूट फीड, संसारले तिनीहरूलाई वितरण, र हाम्रो हृदय तिनीहरूलाई खान. त्यसैले बरु अनुमति हाम्रो हृदय हामीलाई मार्गदर्शन गर्न, हामी सत्य विश्वास द्वारा बाँच्न आवश्यक.
र सबै भन्दा राम्रो एक सर्वश्रेष्ठ यो जीवन बिताउन कसरी बारेमा हामीलाई बताउन परमेश्वरले आफूलाई छ. हामी सिर्फ उसलाई स्वर्ग बाट छनकहरू ड्रप प्रतीक्षा छैन; हामी उहाँले पहिले नै भने के हेर्न. हाम्रो समस्या हामी परमेश्वरको सत्य भन्दा शत्रु को झूट विश्वास छ.
परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि. उहाँले तिनीहरूलाई कसरी बाँच्न लागि निर्देशन दिए. उहाँले हरेक रूख खाने सक्छ भने, राम्रो र खराब को ज्ञान को रूख बाहेक.
अब सर्पले परमप्रभु परमेश्वरले बनाएको थियो क्षेत्र को कुनै पनि अन्य जनावरको भन्दा बढी धूर्त थियो। उहाँले स्त्रीलाई भन्नुभयो, "परमेश्वरको वास्तवमा भन्न के, 'You को garden' मा कुनै पनि रूख खान हुँदैन?"अनि महिलाले सर्पले भन्नुभयो, "हामी बगैचा मा रूखहरू फल खान सक्छ, तर परमेश्वरले भन्नुभयो, 'You कि बगैचा को बीचमा छ रूखको फल खान हुँदैन, न तपाईं यसलाई छुन हुनेछ, तपाईं die.' नत्र "तर सर्पले स्त्रीलाई भने, "तपाईं पक्कै छैन मर्नेछन्. परमेश्वरको लागि तपाईं यसलाई खान गर्दा आफ्नो आँखा खोलिनेछन् थाह, र तपाईं परमेश्वरको जस्तै हुनेछ, राम्रो र खराब थाह। "त्यसैले रूख खाना लागि राम्रो थियो स्त्रीको जब देखे, र यो थियो कि एक आँखा गर्न आनन्द, र एक बुद्धिमानी बनाउन चाहन्छन् गर्न रूख थियो, त्यो आफ्नो फल लिएर खाए, र त्यो पनि जसले उनको थियो पतिको केही दिए, र उहाँले खाए. (उत्पत्ति 3:1-6 ESV)
आदम र हव्वाले परमेश्वरको सत्य भन्दा सर्पले को झूटलाई विश्वास गरे. यो राम्रो तरिकाले हाम्रो मुख्य समस्या हो. हामी तिनीहरूले परमेश्वरको भन्दा प्रस्ताव राम्रो कुरा छ भनेर हामीलाई भन्नुहोस् जब संसारमा विश्वास. यो कि वेबसाइट मा हेर्न बताउँछ गर्दा हाम्रो शरीरमा विश्वास. उहाँले हामी ब्रह्माण्डको केन्द्र मा हुनुहुन्छ भन्छन् जब हामी शैतानको विश्वास. हामीले यसको सट्टा परमेश्वरको सत्यको ती झूट विश्वास. अनि त्यो राम्रो जीवन हामीलाई राख्छ के.
हामी हाम्रो पाप बारी जब असल जीवन सुरु, हामी पछि हाम्रो अनाज्ञाकारिताले सबै छोड्न निर्णय, र हामी येशूमा हाम्रो विश्वास. साँचो जीवन सुरु गर्दा त्यो हो. तर हाम्रो विश्वास त्यहाँ अन्त होइन. हामी परमेश्वरको भरोसा गर्न जारी राख्न दैनिक लड्न र शत्रु को झूट माथि उहाँलाई विश्वास.
विश्वास, एक दैनिक लडाई छ
मलाई थाहा म मात्र पापी यहाँ राती छैन. पाप गर्दा हामी र अक्सर हामी विचार, हामी कमजोरीमा यो क्षण थियो किनभने यो सिर्फ छ. तर त्यो छैन सारा कहानी छ. हरेक पाप समस्या विश्वास समस्या छ. कारण हामी unbelief को पाप. हामी शत्रु झूटलाई विश्वास र परमेश्वरको सत्यको तिनीहरूलाई सट्टा पालन.
त्यसैले जब हामी अख्तियार भङ्ग, हामी झूट विश्वास किनभने यो अधिकार हामीलाई छैन हामीलाई मदत हानि छ कि. र यो हामी उहाँले हाम्रो असल ठाउँमा अख्तियार राख्नु भन्छन् परमेश्वरको विश्वास छैन किनभने छ. र हामी विवाह अघि सेक्स हुँदा, हामी झूट विश्वास किनभने यो छ, भनेर आफूलाई रमाइलो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो भनेर. उहाँले सेक्स विवाहित जोडीहरू लागि हो भनेर भन्छन् गर्दा र यसलाई हामी परमेश्वरको विश्वास छैन किनभने छ, र जहाँ यो सही आनन्द उठाए गर्नुपर्छ प्रसङ्ग छ.
रोमी मा 1, येशूमा विश्वास देखि बग्छ कि आज्ञाकारी - पल उहाँले "विश्वासको आज्ञाकारी" बारे ल्याउन काम गर्नुपर्छ भन्छन्. त्यसैले हामी विश्वास कसरी लड्न गर्छन्? हामी कसरी हाम्रो विश्वास खुवाउन गर्छन्?
हामी परमेश्वरको वचन चाहिए
रोमी 10 भन्छन्, "विश्वास सुनुवाई मार्फत आउँछ, र ख्रीष्टको वचन मार्फत सुनेर। "
हाम्रो आध्यात्मिक जीवन वचन विश्वास सुरु र यो नै साथ जारी. तर हरेक दिन हामी संसारबाट झूट संग bombarded भइरहेको हुनुहुन्छ, शरीरका, र शैतानको सही? तपाईं झूट कसरी लड्न गर्छन्? सत्य संग! त्यसैले यहाँ परमेश्वरको वचन कसरी प्रयोग गर्न को एक उदाहरण. हरेक दिन हामी यौनबारे सन्देशहरू सुन्न, अशुद्ध तस्बिरहरू संग bombarded, र हाम्रो पापी हृदय कि इच्छा र ती झूट विश्वास. त्यसैले हामी सत्य भएकाहरूले झूट लड्न. के परमेश्वरको वचन यौन अनैतिकता बारेमा भन्नुहुन्छ?
यो परमेश्वरको इच्छा छ, आफ्नो पवित्रीकरण: तपाईं यौन अनैतिकता छुँदै नछुने भन्ने; भनेर हरेकले कसरी पवित्रता र सम्मानको आफ्नै शरीरको नियन्त्रण गर्न थाहा, छैन अन्यजातिहरूको जस्तो कामुकतालाई परमेश्वरको थाहा नगर्ने को आवेग मा. (1 थिस्सलोनिकी 4:3-5 ESV)
हामी एक कार जस्तै हो. हामी ग्याँस दैनिक सकिएको. विश्वास हिंडिरहेको जारी राख्न, हामी इन्धन आवश्यक. त्यो इन्धन परमेश्वरको वचन हो. हामी इन्धन छैन भने हामी उसलाई विश्वास गर्न जारी छैन. भन्न छैन हामी उठाउनुहोस हामी atheists हुनेछु वचन एक दिन पढ्न भने. तर जब म वचन छैन, म यो महसुस. म मेरो जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा विश्वास बाहिर crowding को unbelief महसुस.
र हामी एक्लै वचन विश्वास लागि लड्न छैन. हामी परमेश्वरको मान्छे आवश्यक.
तर हरेक दिन एक अर्को यस्तो आग्रह, जब सम्म यो भनिन्छ रूपमा "आज,"तपाईं को भनेर कुनै पनि पापको deceitfulness द्वारा कठोर हुन सक्छ. (हिब्रू 3:13 ESV)
जो विश्वासीहरू छन् हामीलाई ती यो कोठा मा आज राती लागि, के तपाईंको सम्बन्ध अन्य मसीहीहरूले जस्तै हो? तपाईं बस चर्च धाउन वा अरूको राम्रो समय खर्च गर्छन्? हामी वास्तवमा अन्य मसीहीहरूले हिंड्न आवश्यक. हामी नजिक सम्बन्ध मा हुन आवश्यक. हामी उत्तरदायित्व लागि प्रत्येक अन्य आवश्यक. जब म मेरो पत्नी डेटिङ थियो, एक विशाल कुरा मेरो जीवनमा मानिसहरूले मलाई हाम्रो सीमा जवाफदेही पकड थियो.
तपाईं ख्रीष्टमा आफ्नो विश्वास गर्नुभएको छ भने, तपाईंलाई दिन छैन. तपाईं मुक्त गरिएको छ. अनि जब तपाईं स्वतन्त्रता हिंड्न, यो आनन्द उठाउन गर्न चाहनुभएको थियो रूपमा जीवनको आनन्द उठाउन सक्षम हुनेछ. तपाईं हामी बाँच्न सिर्जना बाटो बाँच्न सक्षम हुनेछ.
त्यसैले हामी विश्वास लागि लड्न, तर के आज्ञाकारी गर्छ, जस्तै विश्वासी जीवन नजर? यसलाई हामी राम्रो परमेश्वरको विश्वास द्वारा बाँच्न गर्दा कस्तो खोज्दैन?
द्वितीय. असल जीवन वरिपरि निर्माण
म असल जीवन मेरो पुरानो तस्वीर विनाश कि मसीहीको रूपमा प्रारम्भिक पढ्न कुराहरू थिए. यहाँ एउटा उदाहरण छ.
हामी सबै मान्छे समय समयमा मृत्युको बारेमा कुरा सुनेको छु. हामी मान्छे भन्न सुनेको छु, "जीवनमा केही पनि छैन पक्का तर मृत्यु र कर हो।" एक लोकप्रिय Rapper भने, "म मृत्यु धोखा गर्न सक्नुहुन्छ कारण छैन जीवन पिट्न 'प्रयास गर्दैछु।" मान्छे मृत्यु बचा सकिँदैन भनेर बुझ्न. तर एक जवान मसीही रूपमा, म कहिल्यै अघि सुनेका केही जस्तै थियो कि बाइबल मा मृत्युको बारेमा एक पद पढ्न. प्रेरित पावलले अनौठो तरिका मा मृत्यु बताउनुभयो. पावलले केवल मृत्यु निश्चित थियो भन्न भएन, उहाँले यो एक कदम अगाडी लिए. उसले भन्यो, "लाभ छ मर्न।" के!?
मृत्यु हुँदा आफ्नो दिमाग छ, तिम्रो मुटु, र आफ्नो फोक्सोमा आफ्नो काम गरिरहेको रोक्न. मृत्यु परिवारका सदस्यहरूबाट जीवन र अलग को निष्कर्षमा अर्थ. मृत्यु आफ्नो जीवन काम भन्दा छ मतलब. हाम्रो अन्य परीक्षा विपरीत, मृत्यु छ, व्यक्ति लागि जो मर्छ, शाब्दिक "को दुनिया को अन्त" - जसरी यो एक को अन्त. त्यसैले कसरी मृत्यु संभवतः लाभ हुन सक्छ? जब म मर्न म पैसा बनाउन सक्दैन? जब म मर्न म मेरो स्थिति वृद्धि गर्न सक्दैन. यो केवल असल जीवनको मेरो पुरानो दृश्य संग फिट भएन.
खैर मलाई पावलले यी चार शब्द द्वारा भनाइको तात्पर्य बुझ्न लागि क्रममा - "मर्न लाभ छ" - म तिनीहरूलाई दाँया अघि आएको चार बुझ्न थियो. फिलिप्पी मा 1 उहाँले त जीवित रहन वा आफ्नो खेदो हातबाट मरिरहेका संग ठीक जस्तो देखिन्छ किन पावल भन्छन्. उहाँले पद लेख्छन् 21, "बाँच्नु छ ख्रीष्टको। "यी शब्दहरू संग, प्रेरित मलाई के भन्नुभयो जीवन साँच्चै सबै बारे छ - छैन पैसा, मेरो काम, छैन पनि परिवार - तर येशूले. कसरी मेरो आत्म-केन्द्रित सक्छ, स्थिति-आसक्त worldview कि सत्य अर्को बाँच्न?
मैले देखे गर्नुभएको कुनै पनि खेल मा सबै भन्दा सफल खेलाडी, च्याम्पियन्स, सबै साधारण मा केहि छ. तिनीहरूले विजेता संग एक obsession छ. र आफ्नो obsession, जीत यो गहिरो इच्छा, आफ्नो अन्य इच्छा सबै खेल मा trumps. त्यसैले तिनीहरू मुख्य रूप अनुमोदनहरूमा चिन्तित हुनुहुन्छ, वा हाइलाइट रील बनाउन, वा आफ्नो तथ्याङ्क padding. निश्चय पनि तिनीहरूले सामान सोच्न, तर दिन को अन्त मा, तिनीहरूले के को लागि प्ले छैन. तिनीहरूले जीत प्ले. त्यसैले तिनीहरू मौका छ भने त्यो तिनीहरूलाई फाइदा, तर टोली, तिनीहरूले पारित. तिनीहरू केवल जीत गर्न चाहनुहुन्छ.
खैर कि खेल खेल संग छ. जीवन बारे विचार गरौं. जीवन मा, त्यो कुरा पावलले संग आसक्त छ. अन्य सबै इच्छा trumps भन्ने इच्छा. आफ्नो अन्य नापसंद सबै supersedes भन्ने आवेग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. उहाँले जीवन घृणा कि छैन, वा परिवार, वा सुखसुविधा; यो येशूको आदर सर्वोच्च छ भर्खरै छ. यो मुख्य कुरा हो. र त्यो खण्डमा लेख्छन् के बाट स्पष्ट छ.
पावलले फिलिप्पी भन्छन् 1, उहाँले बाँच्न वा मर्न सक्ने; किनभने येशूले सम्मान हुनेछ र उहाँले राम्रो हुन चाहन्छु. र पद 21 हामीलाई किन यसो भन्छ. तिनले केही कुरा बुझ्नुहुन्छ. बाँच्न ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. जीवन ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. हामी येशूले र येशूको लागि बनाइयो. येशूले हाम्रो ठाउँमा उभिएर हामीलाई नयाँ जीवन प्रदान गर्दछ जो दयालु उद्धारकर्ता छ. येशूले पिता अघि हाम्रो मध्यस्थकर्ताको छ. येशूले हाम्रो निर्णय सबै लागि प्रेरणा हुनुपर्छ. येशूले हाम्रो हरेक कदम पछि प्रेरक शक्ति हुनुपर्छ. यो येशूको बारेमा सबै छ. कुनै राम्रो जीवन अलग्गै छ, किनभने बिना येशूको जीवन कुनै अर्थ छ. बाँच्न ख्रीष्ट हुनुहुन्छ.
आफ्नो जीवन तपाईं बारेमा छैन, तर येशूको बारेमा. त्यसैले यो हामी सबै हेर्नुहोस् कि बाटो परिवर्तन.
हाम्रो सपना र लक्ष्य के? तपाईं ठूलो सपना र ठूलो लक्ष्य हुनुपर्छ, तर तिनीहरूले येशूको केन्द्रित हुनुपर्छ. हामी उहाँ जो हुन उहाँलाई देखाउँछ तरिकामा जीवन बिताउन सिर्जना. पावलले फिलिप्पी भन्छन् 1 उहाँले शरीरमा मा बस्छ भने यो हो कि उहाँलाई लागि फलदायी श्रम.
यो एक हास्यास्पद कथा मलाई सम्झना दिलाउँछ. एक पटक, म डलास मा थियो र म मेरो मनपर्ने तला चिकन स्थलहरू मध्ये एक गए, विलियम गरेको चिकन. सेवा सधैं भयानक छ, तर चिकन त राम्रो छ. ड्राइभ सेवा मार्फत खराब थियो, तर त्यसपछि म अगाडि प्राप्त. त्यो कुरा पछि बन्द छ र म आफ्नो ध्यान प्राप्त. र उहाँ भन्नुहुन्छ, "ओह, तपाईं के मेरो खराब तपाईं bro बारेमा मैले बिर्से। "तपाईं भूल अर्थ? तिमि काम मा छौ! त्यो तपाईं काम मा के छ. तपाईं कसरी काम गर्न भूल गरे? उहाँले विचलित भयो.
त्यसै गरी हुनत, हामी सजिलै विचलित छन्. हामी हामी के गर्न यहाँ राख्न गरिएको छ भूल. र हामी उहाँलाई लागि laboring बारेमा भावुक हुनुहुन्छ, त्यसैले सबै चमकदार कुराहरू दुनिया छ प्रदान गर्न टाढा हामीलाई पुल.
ख्रीष्टको Laboring हामी होइन प्रचारक हुन सबै आवश्यकता. हामी वकिल आवश्यक, Rappers, Secretaries, Waiters, र स्टोर प्रबन्धकहरू भनेर येशूले प्रेम. त्यसैले यो होइन हामी सबै जानु पर्छ हामी वा गर्न Aspire के परिवर्तन, हुनत शायद यसले. के यो साँच्चै अर्थ छ, हामी परमेश्वरको विश्वासीहरूलाई रूपमा गर्न हामीलाई भनिएको छ के परिचित हुनुपर्छ, र कसरी हाम्रो अद्वितीय परिस्थितिमा कि बाहिर काम गर्न बाहिर आंकडा. यो फरक जीवनमा विभिन्न हेर्न छौँ, तर हामी उहाँको महिमा गर्न यो गर्न सक्नुहुन्छ.
मलाई थाहा केही प्रचारक गलत पदहरू प्रयोग, कुनै परीक्षा हो भनेर हामीलाई विश्वस्त. दृष्टिकोण ख्रीष्टको हामीलाई उपलब्ध असल जीवन जीवन अब कुनै पनि परीक्षा मुक्त छ. म सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ - यो वास्तवमा के मतलब गर्दैन? त्यो पनि म बास्केटबल मा चूसना, ख्रीष्टमार्फत म एक एनबीए सबै-स्टार हुन सक्छ? कुनै, पावलले म धनी वा गरिब छु कि भन्दै थियो, म सामग्री छु. म ख्रीष्टको छ किनभने.
हामी कर्पोरेट सीढी को माथि हुनुहुन्न भने परमेश्वरले हाम्रो पार्थिव आमा र पुर्खाहरूले केही हामीलाई स्वीकार गर्ने छैन मन छैन. परमेश्वरको स्थिति माग गर्दैन, उहाँले विश्वसनीयता माग.
जब म पावलका शब्दहरूले पढ्न म चुनौती छु, विशेष गरी पावलको अवस्था विचार. पावलले एक भयानक परिस्थितिमा को बीचमा छ. तर लेन्स त्यो परिवर्तन सबै मार्फत देख्नुहुन्छ. बाँच्न ख्रीष्टको छ उहाँले उहाँको परीक्षण देख्नुहुन्छ लेन्सको.
कहिलेकाहीं हामी परीक्षा बीचमा बच्चा एक फिट फेंक, हामी हरेक परिस्थितिमा हाम्रो बारे छ लाग्छ किनभने. हामी विचार र हामी हाम्रो मित्रहरुलाई गुनासो, कस्तो अन्याय यो छ, र हार्ड कसरी यो छ. हामी विचार किनभने हाम्रो परिस्थिति हामीलाई सहज भइरहेका अन्ततः हो हामी स्वभाव tantrums हुर्केका फेंक. तर तिनीहरू हुनुहुन्न. तिनीहरू येशूको बारेमा हुनुहुन्छ. हामी अलग परीक्षा मार्फत कुस्ती थियो, बरु हामी कसरी असहज ध्यानकेन्द्रित यदि हामी यो बीचमा येशू आदर गर्न कसरी ध्यान केन्द्रित हुनेछ. त्यो राम्रो जीवनको.
येशूले वरिपरि आफ्नो जीवन निर्माण गर्छ यो बोरिंग वा आनन्द बिना हुन छ मतलब? पक्का होइन. मलाई थाहा झूटले थप आकर्षक लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीं, तर सत्य यो मरेको अन्त छ छ. यो धेरै कम शूटिंग गर्नुपर्छ. येशूको पछि होइन हामी कुराहरू आनन्द छैन, यो सिर्फ हामी तिनीहरूलाई आनन्द अर्थ. बरु भावनात्मक चोटबाट गर्न प्रमुख तिनीहरूले थप आनन्द नेतृत्व.
जब यो गर्न चाहनुभएको थियो सन्दर्भ मा आनन्द उठाउन सबै राम्रो छ. जब उहाँलाई वरिपरि निर्माण मित्रता थप रमाइलो छ. दुई क्षमा मान्छे प्रत्येक अन्य क्षमा, जो मित्रता sweeter बनाउँछ. तपाईं पैसा आनन्द सम्म मुक्त गर्न सकिन्छ, तपाईं यसलाई उपासना गर्दा.
आनन्द पछिल्लो गर्दैन. निरर्थक कुराहरू वरिपरि आफ्नो जीवन निर्माण गर्नेहरूले विनाश लागि आफूलाई अप सेट. तर ख्रीष्ट वरिपरि आफ्नो जीवन निर्माण गर्नेहरूलाई कहिल्यै नाश गर्न सकिन्छ. यो परमेश्वरको वरदान हो र यसलाई दूर छैन लिन सकिन्छ.
त्यसैले हामी यो राम्रो जीवनको बारेमा केही विवरण छन्, तर यो कहाँ बाट आउँछ? हामी यसलाई कसरी प्राप्त गर्छन्?
III. असल जीवन एक मायालु परमेश्वर देखि एक उपहार हो
परमेश्वरले तपाईंलाई राम्रो जीवन बिताउन चाहन्छ. उहाँले राम्रो जीवन बिताउन तपाईंले सिर्जना. हाम्रो पाप यो हामीलाई राखिएको के छ. हामी भनिएको गर्नुभएको झूट परमेश्वरले असल जीवन हामीलाई राख्न चाहन्छ छ. उहाँले हामीलाई चाहन्छ जस्तै निराश हुन र आनन्द मा बाहिर सम्झना गर्न. तर त्यो हास्यास्पद छ.
उहाँले हामी पाप तापनि र उहाँलाई अलग थिए कि धेरै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई यो गर्न को लागि क्रममा येशूले पठाइएको. हामी परमेश्वरको नष्ट थिए, सबै राम्रो स्रोत.
त्यहाँ मैले पावलले सिकेका असल जीवन को तस्वीर बीच धेरै मतभेद थिए, र तस्वीर म संस्कृति सिकेका. तर सबैभन्दा ठूलो मतभेद एक हामी त्यहाँ कस्तो छ. विश्व हामीलाई कमाउन भनेर एक "राम्रो जीवन" बेच्छ. र पनि मुश्किल काम गर्नेहरूलाई केही लागि यो हासिल गर्न, यो सम्पर्क बाहिर रहन्छ. तर "असल जीवन" को बाइबलीय तस्वीर फरक छ. यो सबै गर्न उपलब्ध भन्ने एक वरदान हो.
अनुग्रह द्वारा लागि तपाईं विश्वास मार्फत सुरक्षित गरिएको छ. र यो तपाईंको आफ्नै गर्दै छैन; यो परमेश्वरको वरदान हो, कार्यहरू परिणाम छैन, कुनै एक घमण्ड सक्छ भनेर. (एफिसी 2:8-9 ESV)
यूहन्ना 11, येशू भन्नुहुन्छ, "म पुनरुत्थान र जीवन हुँ. जसले मलाई विश्वास, हुनत त्यो मर्न, अहिलेसम्म उहाँले प्रत्यक्ष हुनेछ, र जीवन र विश्वास गर्ने मलाई सबैलाई कहिल्यै मर्नेछन्। "त्यो राम्रो समाचार छ.
येशूले भरोसा अर्थ हामी परमेश्वरको पुनःस्थापित छन्, हामी परमेश्वरको आनंद गरियो किनभने जो अचम्मको खबर छ. हामी उहाँको वचन अहिले उहाँलाई आनन्द प्राप्त. हामी खेल हेर्दै मन, र ठूलो प्रदर्शन गर्ने हुनाले हामी महानता आनन्द. त्यहाँ जो तिनीहरूलाई सिर्जना परमेश्वर भन्दा कुनै ठूलो महानता हो. उहाँको महानता तिनीहरूको दयनीय हेर्न बनाउँछ.
यो पावलले मर्न भन्न सक्छ किन "लाभ छ,"किनभने कि मृत्यु वा बस्ने, येशूले सम्मान हुनेछ. अर्थ जीवन येशूलाई सेवा गर्न पाउने र मृत्यु आफूले येशूमा हुन पाउने अर्थ - र त्यहाँ कहीं उहाँले बरु हुन चाहन्छु छ (फिलिप्पी 1:23). हामी यहाँ पावलले सिक्न सक्छौं. यो सत्य हो, यो मानिसहरूको उपस्थितिमा मलिन धनी हुन भन्दा येशूको उपस्थिति गरिब माटो हुन राम्रो छ.
तपाईं लामो येशूको हुन नगर्नुहोस्? हामी कहिल्यै मर्न भन्न लाभ छ सक्षम हुनेछ, जब सम्म हामी साँच्चै येशूले प्रेम. तपाईंले उहाँलाई यो जीवन भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ? भजन 73. त्यहाँ प्राप्त गर्न मात्र तरिका उहाँको वचन मा उहाँलाई मा नरहन र आफ्नो दृष्टि क्लाउड कुराहरू देखि गर्नाले छ. हामी येशूको थप प्रेम किन हामीलाई केही आश्चर्य, तर हामी उहाँसँग निकटता हामीलाई राख्न कुराहरू अपनाउँछन्. बारी र उहाँलाई चलाउन. यो पनि विश्वास को एक लडाई छ.
हामी बाँच्न सिर्जना बाटो बाँच्न सक्छ.
म असल जीवन को एक ब्रान्ड नयाँ चित्र देखेका थिए भने म कुरा छैन कि सामान पछि मेरो जीवन chasing बर्बाद थियो. तर अनुग्रह द्वारा परमेश्वरले मलाई ती चार शब्द देखाए: बाँच्न ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. अनि उहाँले मलाई एक असल परमेश्वरको विश्वास द्वारा बाँच्न अनुग्रह दिनुभयो.
के राम्रो छ? कसले राम्रो परिभाषित? भगवान. राम्रो येशूले आदर र उहाँसँग भइरहेको छ. लामो म झूटलाई विश्वास गरे रूपमा संस्कृति मलाई भन्नुभयो, म राम्रो जीवन थिएन. तर राम्रो परमेश्वरको विश्वास द्वारा बाँच्न जब म थाले, मेरो राम्रो जीवन थाले. म येशूले नवीकरण जीवन रूपमा राम्रो जीवन हेर्न थाले, येशूले संचालित, र येशूको महिमा गर्न बस्थे. आफूलाई लागि बसोबास गर्ने मानिस यस जीवनमा चिरस्थायी केही कमाइहाले, र त्यो केवल अर्को मा विनाशकारी हानि अनुभव हुनेछ. तर ख्रीष्टको बसोबास गर्ने मानिस अब असल जीवन स्वाद हुन्छ, र आफ्नो मृत्यु मात्र उहाँले सबैभन्दा कुन चाहनुहुन्छ उहाँलाई ल्याउँछ.
sheyi • अगस्ट 20, 2013 मा 11:39 बजे • जवाफ
यो मलाई भएको छ एक ठूलो आशिष्. प्रभु मेरो प्रार्थनाको बस जवाफ छ. आमिन
Bman • नोभेम्बर 15, 2013 मा 2:00 छु • जवाफ
यो वास्तवमा एउटा आँखा ओपनर भएको छ .thnx